Saraki kwesiri ịzọ ọkwa onyeisiala na 2023. Ndị ntorobịa na-eme ngagharị iwe na Kano
Otu ndị ntorobịa kpọrọ onwe ha "Saraki na-abịa na 2023" haziri nzukọ iji rịọ mgbaghara maka ịba mba onye bụbu onye isi oche Senate Abubakar Abubakar Saraki na mbụ wee gbaa ya ume ịzọ ọkwa onye isi ala na 2023.
Mmemme ahụ, nke Umar Faringida, onye nhazi otu ahụ haziri, hụrụ ka ọtụtụ ndị ntorobịa na-akpọ “Nigeria Sai Saraki 2023,” nke pụtara “Nigeria for Saraki 2023.” Ọ mere na Kano na Sọnde.
“N’isochi nsogbu ugbua na Naijiria, nke gunyere enweghị nchekwa, enweghị ọrụ, oke ịda ogbenye, na nke kacha njọ, akụnaụba na-akawanye njọ, anyị ekpebie ịrịọ Abubakar Bukola Saraki mgbaghara n’ihu ọha ma kpọọkwa ya ka ọ zọọ ọkwa Onye isi ala na 2023
“Anyị kwenyere na site na ahụmịhe ya na ihe ọmụma ya, o nwere ikike idozi nsogbu nke adịghị n’otu na mba ugbu a.
“Anyị niile bụ ndị akaebe na ọnọdụ obodo ugbu a, ebe agbụrụ na nkebi na-emebi ntọala nke mba ahụ.
“N’ihi nke a, ọ dị oke mkpa maka ndị ntorobịa Naijiria ka ha bilie ma họpụta onye ndu nwere ntụkwasị obi na nke raara onwe ya nye nke nwere ike ịzọpụta mba ahụ, anyị kwenyere na ọ dịghị onye ruru eru karịa Abubakar Bukola Saraki.
“Anyị hụrụ onyinye Saraki dị ka gọvanọ nke steeti Kwara yana Onye isi oche nke Senate, nke na-enweghị nnukwu nzukọ kemgbe ọ hapụrụ.
“Ọ dịla mkpa ka o bilie ma zaa oku nke ndị ntorobịa Nigeria ka ọ pụta ịzọpụta mba ahụ site na nsogbu ugbu a. Ọ ga-alaghachi ma malite njem ya ebe ọ kwụsịrị.
"Nke a bụ ihe mgbaru ọsọ nke otu Saraki na-abịa 2023," Faringida gwara ndị bịara mgbakọ ahụ.
Ndị nne na nna gosipụtara na NASS, na-achọ ka ahapụ ụmụ akwụkwọ Greenfield Nwere ike 4, 2021
Gosiputa na ugwo ugwo olu gi - Uche Maduagwu dares Meurer, Rosy Nwere ike 27, 2021
NGX nwetara N88 ijeri iji gbasaa ọsọ ọsọ April 20, 2021
Mgbe ndị na-enye onyinye gwụchara, ndị IDP na-agụ agụụ na-aga ego na mango maka nri. April 24, 2021
Ondo ga-eziga ndị ntorobịa ugwu ugwu 45 ka ha laghachi Kano na Jigawa Nwere ike 3, 2021
Ndị okenye Northern kwenyere na a ga-eme President Buhari Nwere ike 10, 2021
Ndị Ntorobịa Arewa Na-agwa Ohanaeze Ka Ha Na Nnamdi Kanu Na-emekọ Ihe, Ndị Sezọ Ọzọ Tupu Ha Achọọ maka idencybụ Onye Isi Ala n’afọ 2023 April 22, 2021
Tags:gọvanọ nke kwara steeti, saraki